Ogeysiisyada - Guddigu
Wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay guddigu.
Murugo Qoto Dheer U Gal Aragtida Aan La Gudbin: Diirada Saaridda Lahaanshaha
Ka dib markii aan maqalnay ku dhawaad ​​600 oo sheeko-yaqaanno ah, waxaan maqalnay saddex shay oo qaylo iyo qaylo ah: Dhallinyaradu ma quusan; waa la eryay, waxay rabaan inay sameeyaan ...
Dib u eegis wada shaqaynteena 2021, U diyaargarowga shaqada imanaysa
Xagaagii 2021, 100Kin10 waxay bilaabeen inay la-hawlgalayaasha kala hadlaan waddanka oo dhan fikraddayada ah Guddi-la'aan, kaas oo u rogi doona siyaasad-dejineed madaxeed. Waxaan aaminsanahay in,…
Aragtida laga helay Sheekooyinka Guddi-la'aanta
In ka badan 500 oo dhallinyaro ah oo dalka oo dhan ah ayaa la wadaagay waayo-aragnimadooda sayniska, tignoolajiyada, injineernimada, iyo barashada xisaabta iyada oo loo marayo UnCommission, iyaga oo siinaya khibradahooda…
Illaa iyo hadda, in ka badan 300 oo dhallinyaro ah ayaa si geesinimo leh ula wadaagay waayo-aragnimadooda STEM iyaga oo aan u hoggaansamin, iyagoo tilmaamaya guulaha iyo caqabadaha barashada preK-12. Waxaan sii wadnaa…
UnCommission -ka ayaa isu keenaya boqolaal dhallinyaro ah oo dalka oo dhan ah si ay khibradooda shaqsiyeed ula wadaagaan sayniska, injineernimada, farsamada iyo barashada xisaabta si ay u caawiyaan…